सर्वश्रेष्ठ भैंसे - Graton
चाहे तपाई Graton रिसोर्ट र क्यासिनो को लागी एक नयाँ आगन्तुक हो वा एक फिर्ती सदस्य, तपाईले सम्भवतः "Buffaloooooo" को कल सुन्नुभयो।
२००ist मा एरिस्टोक्राट द्वारा विकसित बफेलो स्लट खेल संग्रह, एक सबै-समय प्रशंसक मनपर्ने को रूपमा बाहिर खडा छ! जस्तो देखिने अनगिन्ती संस्करणहरू सिर्जना भए, यो ठिकै भन्न गाह्रो छ कि कुन खेल मोडलले हाम्रो पाहुनाहरू बीच सबैभन्दा लोकप्रियको रूपमा सर्वोच्च शासन गर्दछ (तर, हामी प्रयास गर्न जाँदैछौं)। यहाँ हाम्रो शीर्ष Buff बफेलो स्लट खेलहरूको सूचीमा हेर्नुहोस्।
के यो मूल शीर्षमा सम्भव छ? भैफलो आफ्नो प्रकारको पहिलो र संस्करण हो जसले यो सबै सुरू गर्‍यो, देशभर क्यासिनोहरूमा पपिंग गर्दै। डिजाइनमा सरलीकृत र १,००० भन्दा बढी तरीकाले जित्नको लागि, उद्देश्यहरू यस रोमाञ्चक, पाँच-रील खेलमा स्पष्ट छन्। प्रदर्शनमा देखिने पुरस्कार जीत ट्रिगर गर्ने प्रतीकहरू उत्तरी अमेरिकामा लोकप्रिय वन्यजन्तुहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्: स्ट्याग, ईगल, प्यूमा, र भैंस। अन्य उल्लेखनीय प्रतीकहरू जसले खेलाडीहरूलाई नि: शुल्क खेलहरू र विशाल भुक्तानीहरू ट्रिगर गर्न अनुमति दिन्छ सूर्यास्त प्रतीक र मायालु लिबर्टी सिक्का समावेश गर्दछ।
बुफलो गोल्ड संग्रह
भाग्य को एक धेरै धेरै बफेलो गोल्ड फ्रन्चाइज मा यो रोमांचक रीमेक मा एक स्पिन संग तपाईंको बाटो आउन सक्छ। भैंसो गोल्ड संग्रहले विशाल ज्याकपट्समा प्रतीकहरूको साथ प्रस्ताव गर्दछ जुन भैंसहरूमा परिवर्तन हुन सक्दछ बोनस स्पिनको बखत अन्तहीन रीट्रिगरहरूको लागि! सबै १ Golden गोल्डन बफेलो हेडहरू संकलन गर्नुहोस् विशाल भुक्तानी दावी गर्न!
BUFFALO GOL REVOLUTION
प्रगतिशील खेल यहाँ बफेलो गोल्ड क्रान्ति संग रहन को लागी छ। यो प्रगतिशील ज्याकपॉट प्रस्ताव गर्ने बफेलो स्लट खेल श्रृंखलाको पहिलो हो, तपाईं हाम्रो उत्साह बुझ्न सक्नुहुनेछ! पारम्परिक विधि निःशुल्क स्प्रिन पुन: ट्रिगर गर्न प्रस्ताव गर्नुको सट्टा, बफेलो गोल्ड क्रान्तिले व्हील स्पिन थप गरेको छ नि: शुल्क स्पिनहरू, अतिरिक्त हेडहरू, र एक शानदार भव्य पुरस्कारमा अवसरको लागि अवसरहरू! सबै क्लासिक बफेलो एक ताजा लग संग महसुस यो बफेलो परिवार को एक प्यारा संस्करण बनाउन।
भैंसो घुमाउरा सीमा देखि बभेलो ग्रान्ड मा ठूलो स्क्रीन! एक कन्भेभसँग, एचडी डिस्प्ले जुन माथिको माथि वर्णन गरिएको बफेलो स्लटको भन्दा दुई गुणा आकारको छ, यो खेलले खेलाडीहरूलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ। बफेलो ग्रान्डले तपाईंलाई बाल्ड ईगलले बास्लो बोनस व्हीलमा विशाल गुणकहरू, बोनस स्पिनहरू, र बफेलो भव्य प्रगतिशील ज्याकपोटहरूमा पुग्ने मार्गनिर्देशनको साथ आकाशमा उडाउनेछ!
BUFFALO हीरा १० औं वार्षिक संस्करण
जब हामी क्लासिक्सको कुरा गर्छौं हामी सबै अलि अलि प्रस्ट हुन सक्छौं। धन्यबाद, एरिस्टोक्राट पनि थिए र बफेलो डायमंड १० औं वार्षिकोत्सव संस्करण जारी गर्ने निर्णय गरे। यस स्लट खेलमा एक शानदार एस-वक्र, एचडी डिस्प्लेले भरिएको छ जुन सबै चीजहरू भैंसेले भरिएका थिए जुन हामीले जान्यौं र माया गरेका छौं। खेलाडीहरूले लगभग १ free० नि: शुल्क खेलहरू ट्रिगर गर्न अवसरहरूको लागि हरियो र बैजनी हीरा प्रतीकहरूको साथ २x, 3x र xx गुणकहरू अनलक गर्न सक्दछन्। लामो प्रत्यक्ष बफेलुओ!
बफेलो स्लटहरू २०० 2008 देखि लामो यात्रामा आएका छन्। एक दशक भन्दा बढि खेलाडीहरूलाई मोहित गरेको गेमप्लेका साथ हामी विश्वस्त छौं कि ती वर्षहरू आउँदैछन्। यदि तपाईंसँग स्पिन लिने मौका छैन र सबै बज के बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई तपाईंको अर्को भ्रमणमा हेर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई एक रील ट्रीटको लागि छौं भनेर वचन दिन्छौं!
अन्य स्लट खेलहरूमा जानकारीको लागि हामी प्रस्ताव गर्न चाहन्छौं, कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् स्लट पृष्ठ। हामी हाम्रा पाठकहरूलाई पनि Graton रिसोर्ट र क्यासिनोमा आउने सबै नयाँ नयाँ स्लट खेलहरूको अपडेटहरूको लागि हाम्रा सामाजिक मिडिया च्यानलहरू जाँच गर्न आग्रह गर्दछौं!
Graton मा आफ्नो खेल प्राप्त गर्नुहोस्
तपाइँको मनपर्ने स्लट मिसिनहरु देखि टेबल खेलहरु को रूलेट सम्म, Graton मा खेल्न को लागी सधैं केहि नयाँ र रोमाञ्चक छ। […]
थप पढ्नुहोस्… बाट Graton मा आफ्नो खेल प्राप्त गर्नुहोस्
जून २,, २०२१
Graton मा शीर्ष पप संस्कृति स्लटहरू
यदि तपाईंलाई कहाँ हेर्ने हो भने पप संस्कृतिका केही ठूला नामहरू हाम्रो खेल फ्लोरमा अवस्थित छन्। यसमा […]
थप पढ्नुहोस्… बाट Graton मा शीर्ष पप संस्कृति स्लटहरू